जुत्ता लगाए पछि गन्हाउने समस्या छ ! यसताे गरर्नुर्हास् – Samachar Pati
१७ माघ । यति तपाईको जुत्ता लगाए पछि गन्हाउंछ भने नुनको प्रयोग गर्नुहोस् । हो, नुन मानिसका लागि अत्यावस्यक पर्दाथ हो । जसले खानालाई स्वादिष्ट बनाउने काम गर्दछ । तर, नुन अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । नुनको प्रयोग यसरी गर्नुहोस् तपाईको खुट्टा गन्हाउंने समस्या च्वाट्टै हुन्छ ।
प्याज र लसुन खाएपछि हात गनाउने समस्या हुन्छ । तर, सजिलै यस्तो समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि हातमा नुन रगडेर पानीले सफा गर्नुपर्छ । यदि छोटो समयमै जुत्ता गनाउने समस्या भए मोजामा सानो पोका नुन राख्नुस् । र, आधा घण्टाभित्रै गन्ध गायब हुन्छ ।
काटेको फललाई ताजा बनाउनका लागि पनि नुन उपयोगी बन्न सक्छ । काटेको फलमा अलिकति नुन छर्किएर राखेमा लामो समय सम्म ताजा रहन सहयोग पुग्छ । नुनलाई तामाको भाँडा चम्काउन वा भाँडामा लागेको खिया फाल्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मैनबत्तीलाई लामो समय टिकाउनका लागि नुनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि डिनरमा मैनबत्तीको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यो विधि अपनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि बाल्नुपूर्व लामो समय मैनबत्तीलाई नुनमा राख्नुपर्छ ।
जान्नुहोस ! वर्षायामको मौसममा कस्तो खाना खादा हुन्छ शरिदमा फाइदा
कपालमा चाया परेर तनाबमा हुनुहुन्छ ! यस बाट छुट्कारा पाउन अपनाउनुहोस् यस्तो घरेलु उपाय